Gbasara Anyị - Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd. bụ a pụrụ iche ụlọ ọrụ na mmepụta na mbupụ nke hotel n'ụlọ akwa ngwaahịa. Anyị isi mkpara nwere ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ na home akwa ubi. Uche ha na ịdị uchu ha na-eme ka ha rụọ ọrụ nke ọma na mpaghara a.
Anyị nwere anụ ụlọ nrụpụta na ngwaahịa anyị ka ebuputara na USA, Canada, Australia, Europe, na Middle East. Anyị na-agbaso ụkpụrụ ahụ: Ogo bụ ntọala nke ụlọ ọrụ, Creditability bụ Life of a Company. Anyị na-ele mkpa ndị ahịa anya dị ka ihe kachasị mkpa, ma na-ewebata ngwaahịa emelitere maka ndị ahịa anyị.
Mmadụ Bịa ahịa si n'ụwa nile na-iru ogologo oge azụmahịa mmekọrịta anyị na-ewetara onye ọ bụla ọzọ ihe ịga nke ọma na uru. Anyị na-atụ anya mgbasawanye nke azụmahịa anyị na ndị ahịa si n'ọtụtụ mpaghara ụwa ndị ọzọ.
A na-atụ anya ngwaahịa anyị niile ka ndụ gị nwee ntụsara ahụ.